यी राशि भएका यु'वती हरु लाइ आफ्नो घरको श्रीमती अथवा बु'हारी बनाउदा घरलाई बनाउछन स्वर्ग जानिराखौ ! »
यी राशि भएका यु’वती हरु लाइ आफ्नो घरको श्रीमती अथवा बु’हारी बनाउदा घरलाई बनाउछन स्वर्ग जानिराखौ ! ज्यो’तिष विज्ञा’नमा हामी जो को’ही धेरै विश्वास वि’श्वास गर्छौ । हु’न पनि हो, ज्यो’तिष विज्ञान भने’को हाम्रो मानव जी’वनमा जो’डिएको एक शास्त्र हो । ज्यो’तिष शा’स्त्रले भनेका र भवि’ष्यवाणी गरेका क’तिपय’कुराहरू मिलि’रहेका छन् । यस्तै मध्य एक राशि अनु’सारको व्यव’हारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ । मानि’सका फरक फरक राशि अनुसार उसको व्य’वहार फरक हुने गर्दछ । वि’वाहको सम्बन्ध’मा पनि राशि अनुसार नै वैवाहिक सम्ब’न्ध र परिवा’रको निर्धा’रण रहने गर्दछ । ज्यो’तिष शास्त्र’का अनुसार यी तल दिएका राशि हुने यु’वतीहरू धेरै राम्रा र सफ’ल बु’हारी बन्न स’क्छन् ।
भैरहवा, १८ साउन । गरिब, दुखी, असहाय, अपाङ्ग तथा सडक बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले भैरहवामा सामाजिक...